Loltuun Naayijeeriyaa namoonni 700 Bokoo haraamiin qabamanii turan harkaa bahan. - BBC News Afaan Oromoo
Loltuun Naayijeeriyaa namoonni 700 Bokoo haraamiin qabamanii turan harkaa bahan.
Goodayyaa suuraa Looltuun suuraa namoota kanneenii muraasa duraan Bokoo haraamiin kan qabamaniidha jedhe ifa taasisee
Humni waraanaa Naayijeriyaa akka jehdeetti, namoonni 700 ol ta'an duraan milishoota boboo haraamiin kaaba-baha biyyaatti qabamanii turan hiidhaa keessaa bahan.
Dubbi himaan humna waraanaa, koloneel Timotii Antighaa akka jedhanitti, karaa haroo Chaadiin odoolawwan hedduu qaxxaamuruun magaalaa Mongunoo kan bulchiinsa Bornoo keessaa gahaniiru.
Waan humni waraanaa kun jedhe kan mirkanneesse garuu omtuu hin jiru.
Riipoortarri BBC akka jedheetti harkaa bahiitiin kunis yeroo gara yerootti kan ta'aa jiru fakkaata jedheera.
Waraanichis tarkaanfiin humna waraanaa dhiheenya kana gaggeefamee, 'Deep Punch II' humna bokoo haraam dadhabsiiseera.
Pirezidaantiin biyyattii Muhaammadu Buhaarii haasaa waggaa haaraa isaatii gariichi 'rukutameera' jedhaniiru.
Barreefama fuula feesbukii Waraana Naayijeriyaa mummee irratti maxxanfameenis, Koloneel Anitighaan ''namoonni 700 kan qonnaan bulaa, kiyyeessitoota qurxummii, fi miseensota maatii isaanii of keessaa qabufi kan duraan bokoo haraamiin akka hojjattoota qonnaatti qabamanii turaniidha'' jedheera.
Akkasumas tarkaanfiin dhiheenyaas '' kan caasaa fi haalaa dhiyeessitii kan akka jiddu gala quunnamtii, lafa omishaasaanii, meeshaalee ittiin dhootu tolfatan, konkolaatootaa fi mishaalee kan biraa barbadeessu irratti xiyyeefate ture,'' jedhaniiru.
Goodayyaa suuraa Warreen amma baqatanii bahanis qonnaan bultoota, kiyyeessitoota qurxummii fi maatii isaaanii akka hojataniif qabaman ta'u himameera.
"Caasaan ajjajaafi waan ittiin jiraatan barbadaa'unsaa akka oddoolawwan gadhiisuun baqatanii fi kanneen qabatanii tursiisa akka gadiisan kakaaseera,'' jechuun barreesseera.
Koloneel Anitighaa akka milishaan isaan jittuutti dhokate akka hinjiraannee adda baasuuf kan danaafaman ta'u dubbataniiru.
Itti eedda'unis, dubartoota baqatanii deebii'an keessaa dubartoonni lama jiddu gala loltu keessatti nagaan dahusaanii himaniiru.
Dulli jeequmsa Islaamummaa bokoo haraam waggoota saddeettan darban keessa taasiseen, namoonni kuma 20,000 kan ajjeefamanii kanneen miliyoona 2.6 ta'an ammoo bakka jireenyaa isaanitii buqa'usaanii barameera.
Taayitaaleen osoo cimuu baatee, loltoonni bokoo haraam akka rukutamees humna waaraanaa fi siviloota irratti xiyyeefachuun hallellaa cimsee ture.
Manni hundeessaa Bokoo Haraam 'godambaa ta'uufi'